Ho Avy Ny Fihodinana Faharoan’ny Fifidianana Nandrasana Hatry ny Ela Teto Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2013 19:22 GMT
Mizotra mankany amin'ny fihodinana faharoa ny fifidianana ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Nitsitaitaika ny fivoahan'ny valim-pifidianana hatramin'ny 25 Oktobra 2013 -ny voalohany hatramin'ny nisian'ny fanonganam-panjakana notohanan'ny miaramila tamin'ny 2009- fa ny vokatra farany dia mampiseho fa ny kandidà Jean-Louis Robinson dia nhaazo ny 21,1 isanjaton'ny vato, ary i Hery Rajaonarimampianina kosa nahazo ny 15,9 isanjato.
Efa napetraka ho amin'ny 20 desambra ny fihodinana faharoa. Heverina ho akaiky iny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izay nahongana tamin'ny 2009, sy Andry Rajoelina, izay filohan'ny tetezamita amin'izao fotoana izao ireo kandidà roa ireo. Na Ravalomanana na Rajoelina dia samy voasakana tsy nahazo nirotsaka tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena.
Efa nandrasana fatratra ny fifidianana, ary “nilamina tamin'ny ankapobeny” ny fandrotsaham-bato ka nihazakazaka nilaza ny fizotrany ho “malalaka sy mangarahara” ny mpanaramaso iraisampirenena, maro tamin'ireo tokony ho mpifidy no tsy afa-nandrotsa-bato noho ny olona teo amin'ny lisi-pifidianana, hoy ny tatitry ny allAfrica.com.
Ireo kandidà roa izay hizotra ho any amin'ny fihodinana faharoa: Jean-Louis Robinson (ankavia) sy Hery Rajaonarimampianina. Saripika avy amin'i Ta Ramses ao amin'ny Facebook (nahazoana alalana)
Naneho ny heviny tamin'ny valim-pifidianana ny bilaogera. Lalatiana Pitchboule, nanoratra tao amin'ny bilaoginy [fr]:
Afa-nanatri-maso ny hafanam-pon'ny olom-pirenena nanoloana ny fizotry ny fifidianana aho tao amin'ny biraom-pifidianana be mpifidy iray. Afa-nanatri-maso ny fanajan'izy ireo ny voka-pifidianana. Fanehoana mamirapiratry ny demokrasia izay ahitana ny faneken'ny rehetra am-pifaliana ny filazana isaky ny vato tokana
Ny lahatsary avy amin'ny Tossoa Bacca mandravaka izany rivotra niainana tao amin'ny biraom-pifidianana izany [mg]:
Ny hafa niezaka ny manombana ny ho vokatry ny fihodinana faharoa raha mifototra amin'ny voka-pifidianana fihodinana voalohany:
#mdg2013: Sarintanin'ny vokatra isaky ny distrika izay ahafaha-maminavina izay mety ho vokatry ny fifidianana fihodinana faharoa… http://t.co/X1FT6qzOEc
#Madagascar: Tsy manana herijika ny ho lany mihitsy i JL Robinson. Hanao ny fomba rehetra hitazonana ny fahefana ny HAT [Fahefana Avon'ny Tetezamita].
Efa milaza mialoha ny hisian'ny krizy hafa sahady ny fanehoan-kevitra sasany, araka ny notaterin'ny Radio France Internationale [fr]:
Efa vonona daholo indray ny pitsopitsony rehetra hahatongavana amin'ny krizy vaovao: andrim-panjakana tsy azo itokisana, fifidianana nomanina tao anaty fikoropahana tsy ao anaty toe-draharaha milamina… Efa hita rahateo fa maro ireo kandidà no mitaky ny hanafoanana ny fihodinana voalohany. Misy mpiara-dia aminy ihany no miampanga ny kandidàm-panjakana, Atoa Hery Rajaonarimampianina, ho mandika ny fitsipika ka mitaky ny fanesorana azy! Maro dia maro ny ohatra manohitra ny fangaraharan'ny fifidianana. Ao anatin'izany toe-draharaha izany, raha tsy maintsy handresy amin'ny fihodinana faharoa ny kandidàm-panjakana, dia tsy hahazo ny rariny ilaina hametrahany ny fahefana mahafiloha azy.
Tsy misy mihitsy ny herijika hahalanian'ny kandidàn'ny mpanohitra ny fifidianana satria tsy maintsy hanao ny fomba rehetra hitazonany ny fahefana ireo mitazona ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Fahadisoana goavana ilay sady tsy Rajoelina no tsy Ravalomanana, raha jerena ny vokatry ny fihodinana voalohany. Naverin'ny mpifidy amin'ny toerany ireo tompon'andraikitra tamin'ny krizin'ny taona 2009 ary nahintsany ireo mitady ny lalana fahatelo.
Mandritra izany fotoana izany, na dia mipetraka aza ny lalam-pifidianana mandrara ny filohan'ny tetezamita tsy hanohana mivantana kandidà iray, dia nohamafisin'i Andry Rajoelina ampahibemaso ny fanohanany an'i Rajaonarimampianina, izay minisitry ny tetibolany teo aloha. Nitatitra ny Radio France Internationale [fr]:
Manamafy izany Atoa Jean-Eric Rakotoarisoa, Mpampianatra Lalàna ao amin'ny Oniversiten'Antananarivo : “Ahafahana manaisotra an'i Hery Rajaonarimampianina io fanohanan'i Andry Rajoelina io. Hahatongavana amin'izany, tsy maintsy ametrahana fitakiam-pamotorana ao amin'ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana ka anjarany ny mamaritra raha tena nahazo na mahazo fanohanana avy amin'i Andry Rajoelina tokoa i Hery Rajaonarimampianiana”.
Ny mpanao gazety Sébastien Hervieu nitatitra ny fihetseham-pon'ny kandidàn'ny mpanohitra tamin'ity fanohanana malaza nefa tsy nampoizina ity [fr]:
Nilaza tamiko i Robinson Jean Louis tamin'ny zoma fa hitaky ny fialan-dRajoelina raha manohana kandidà amin'ny fomba ofisialy
Susanne nampitaha ny fotoam-pifidianana teto Madagasikara amin'ny Fetibe an-dalambe:
Tsy miharihary loatra izany hoe hifidy izany eto Madagasikara. Tsy misy antoko politika. Tsy misy fandaharan'asam-pifidianana. Tsy misy foto-kevitra, tsy misy ankavia na ankavanana na afovoany, tsy misy repoblikana na demaokraty [sic]. Sarotra ny ahafahana mametraka safidy mazava rehefa tsy afa-mampitaha programa ianao. Fa ahoana no isintonan'ny kandidà iray ny mpifidy hitodika any aminy ? amin'ny alalan'ny T-shirts. T-shirts bobaka. Sy ny hira be dia be. Misy kandidà iray antsoina hoe Sylvain. Ny tarigetrany dia hoe “Sylvain sur vingt” (mampihomehy mihitsy). Hafa mihitsy ny hirany : Bye Bye tsy fananan'asa, bye bye hanoanana, bye bye aretina. Amin'ny fihainoako, ny antsasak'ireo hira ireo dia tahaka ny avy any am-piangonana, ny hafa kosa tahaka ny avy any amin'ny fetibe an-dalamben'i Karaiba. Misy aza moa ny kandida no miakanjo tahaka ny mpihiran'i calypso